Izinto ezi-5 Ongazazi Ngamakhamera Womzimba Wamaphoyisa | Izixazululo ze-OMG
Izinto ze-5 Ongazazi Ngamakhamera Womzimba Wamaphoyisa
Amakhamera agqokwa ngomzimba awemasha ngokuphelele kulesi sizukulwane. Sivame ukuqaphela abaqaphi bezokuphepha kanye nama-ejenti asebenza embozekweni asebenzisa lokhu ukuhlakanipha ngenkathi esebenza. Njenganoma obuphi ubuchwepheshe, ikhamera egqoke imizimba yamaphoyisa isiphenduka umkhuba omusha kuma-ejensi ezomthetho anamuhla. Njengoba izinhlangano ziqhubeka kancane nezinhlelo zazo, kubalulekile ukuthi zibheke kabi ohlelweni lwekhamera egqoke umzimba bese zihlaziya uma kufanelekile ngempela futhi kukhona isizathu sokuqalisa ukusebenza kwalo.
Lapho kusondela indlela umphakathi obheka ngayo ngalolu daba, kubonakala ukuthi kukhona ukwanda kokuzibophezela nokungabi sobala kwamaphoyisa uma esezindongeni ezigqokwa ngumzimba. Ucwaningo selukhombisile ukuthi indlela yokuziphatha nobungcweti kwabonwa eqongeni lwayo, akukusha neze njengoba kujwayelekile nje, abantu ngokwemvelo bathambekele ekuziphatheni kahle lapho behlala bazi ukuthi kungenzeka ukuthi bangaphansi kokuqashwa. Babonwa ukugwema ukusetshenziswa kwamandla lapho kungenasidingo noma kugwema ukusetshenziswa ngokweqile kwamandla ukuze babambe.
Izinzuzo zadonswa yisikhulu ngenkathi sinamakhamera agqokwa ngomzimba
Akuzindaba ukuthi izinhlaka eziningi ezisebenzisa umthetho zinemibono ephikisayo mayelana namakhamera agqokwa ngomzimba, abaningi bazizwa bengakhululekile ngokukugqoka ngenkathi besebenza. Ezinye izinzuzo nokukhathazeka okuqaphelekile yilezi:
Ukuba nesithombe esicacile sesimo sengqondo sangempela somuntu, kuvame ukuba yinkinga lapho ubopha i-punk ngokungaziphathi kahle nokweqa umthetho. Kwesinye isikhathi, laba bantu abanemikhuba emibi babonwa bagqoke izingelosi ezembeni futhi bakhulume bezolile impela. Lokhu kungakhungathekisa impela kepha ngekhamera egqoke umzimba, ividiyo ekhonjisiwe ingadelela kalula i-farce noma i-charade abangazama ukuyidonsa. Lokhu kungaba wusizo olukhulu uma kuziwa ekushushisweni.
Imvelo engenamkhawulo yekhamera, ngokwemvelo sikwethemba esingakubona ngamehlo ethu amabili, lokhu kuyinto evamile. Kuhlala kulula kakhulu ukukhiqiza ubufakazi bevidiyo ukusiza icala, uthola ukuthatha ijaji noma ijaji liye emgwaqweni ukuze ubakhombise ngokwenzeka lapho. Lapho bebona ngamehlo abo, ukwenza isinqumo kuba lula kakhulu kubo.
Ngokwethulwa kwamakhamera agqokwa ngomzimba, kubukeka sengathi sehla kakhulu isikhalazo nezinsolo ezibhekiswe kumaphoyisa. Abantu bathambekele ekuziphatheni okwengeziwe futhi bathobele ikakhulukazi lapho bazi ukuthi kunethuba lokuthi babhekelwe.
Ukwehla okukhulu komthetho wobulungiswa bobugebengu njengoba izigebengu ziwavuma amacala uma sebedlaliwe ubufakazi bevidiyo. Uma nje ubanjiwe kulesi senzo lokhu kungakhonjiswa kalula kunoma ngubani, lokhu kunciphisa amathuba noma ukuzimisela kwanoma ngubani okuvikela wena ngoba wonke amaphuzu akhombisa ngokuhlukile.
Kuke kwaba nenkinga yokuthi yini amaphoyisa okufanele aqoshwe futhi kufanele futhi aqophe konke? Hhayi-ke, le yinkinga enkulu, Izinkambi zomzimba zinamandla okubhubhisa ubudlelwano iphoyisa ebelilakha selokhu lafika lapho selikhona. Kufanele futhi kwaziwe ukuthi ofakazi endaweni yesehlakalo bathanda ukungaziwa futhi bazokwenza konke okusemandleni ukugwema ukuqoshwa. Okunye kwalokhu kunquma, kuqondisa amaphoyisa ukuthi azosebenzisa nini ukuqonda futhi anikeze nemingcele ezoqondisa ukusetshenziswa. Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokuqonda:
Umuntu udinga isikhulu ukuthi siqophe konke ukuxhumana kwakhe nomphakathi hhayi nje ngezikhathi zokushaya, lokhu kubalulekile ukuthi urekhode ngisho nezingxoxo ezingekho emthethweni nezakhamuzi. Kepha ngokuya kweminye imithetho, ukudinga ukuthi iphoyisa liqophe konke lokhu kubukela phansi ubumfihlo bokuthi izakhamuzi futhi ukuzenza umthetho kungaba yiphutha futhi kubuye kubuye nomlilo.
Okunye ukuthi kudingeke ukuthi iphoyisa lisebenze no-cam wakhe lapho ephendula izingcingo zenkonzo yabo. Lezi zinsizakalo zingafaka: ukusesha, ithrafikhi, ukuboshwa, izitobha, izinto ezilandelwayo kanye nokuhlolwa imibuzo. Ukuba nesikhulu esirekhodiwe yisehlakalo sobugebengu empilweni kungasiza ngempela futhi kusize ekuxazululeni icala lobugebengu ngokushesha.
Ukuqondisisa yinto ebaluleke kakhulu futhi okufanele ibonwe, lokhu kubaluleke kakhulu njengoba ungaphula ubumfihlo bezomphakathi futhi lokhu kungaholela ekuphazamiseni. Kubalulekile ukuqaphela izikhathi ukuthi ungarekhodi umcimbi; njengoba lezo zikhathi zingaphephile, zingabizi noma kungenzeki. Lokhu, nokho, kudinga ukuthi izikhulu zibhale amadokhumenti ukuthi kungani bezowabeka amakhamera abo agqoke umzimba.
Ukuba namakhamera agqokwa ngomzimba, kubanikeze ithuba elanele lokukwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe bokuqashelwa kobuso ukubona abantu abathintekayo ecaleni. Ukusetshenziswa kwale khamera kuvumela isikhulu ukuthi siqophe indawo esihlala kuyo, kuze kube manje banamalungelo asemthethweni okuba lapho. Enye ingxenye okufanele ugxile kuyo, ukuthi zingagcinwa isikhathi esingakanani lezi zanselo, zisetshenziswe, zigcinwe noma zibhekiswe kuzo. Lokhu kubuye kubuyehlukanise kube yizinkundla zokufakazela ubuqiniso nezingelona ubufakazi. Izindlela ezisetshenziswayo zangaphambilini ezingasetshenziswa ngezinhloso zokuphenya ngenkathi ezokugcina zibandakanya ukusakazwa okungenanzuzo noma ubudlelwano nophenyo, yingakho nje kungenamsebenzi. Kubalulekile ekuqapheleni ukuthi iphoyisa lingarekhoda ukuthi liphenywe umsolwa, kepha kungaba okungalungile ukuqopha uphenyo nganoma yisiphi isakhamuzi emgwaqweni. Kuyadelela futhi le migqa akufanele iwele.
Kuhle ukuqaphela ukuthi izinqolobane ezigqokwa ngumzimba zinezinzuzo eziningi, kodwa futhi kufanele kwaziwe ukuthi ukuqeqeshwa kumele kunikezwe amaphoyisa futhi kubenze bazi nokuthi bangazisebenzisa nini futhi nokuthi bangazisebenzisa futhi. Okubalulekile kokuqonda ngeke kugcizelelwe.
Imali eningi obekufanele ichithwe uma kusetshenziswelwa amacala asenkantolo isindisiwe, kumane kulula kakhulu ukubona izinto zivaliwe futhi kuvimbele ukufakwa kwesikhathi senkantolo. Abaphenyi ocwaningweni oluholwa yilebhu emnyangweni wamaphoyisa e-DC nase-DC Metropolitan bahlole ukuthi ngabe ukubakhona kwekhamera egqoke isidumbu emaphoyiseni kube nomphumela omkhulu ngendlela enkulu yini. Babone ukuthi izikhulu ezinamakhamera agqokwa ngomzimba zibandakanyeka kakhulu emacaleni asenkantolo, nokho kuningi okungaqiniseki ngoba bebenqatshelwe ukufinyelela emiphumeleni yokwahlulela.
Izinto ze-5 Ongazazi Ngamakhamera Womzimba Wamaphoyisa igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4027 Ukubuka kwe-1 Namuhla